ရှင်ပင်သာဒွန်းဦးဘုရားမော်ကွန်းကျောက်စာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြင်းခြံဒိစတြိတ် နွားထိုးကြီးမြို့ ရွှေကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ ရှင်ပင်သာဒွန်းဦးဘုရား မော်ကွန်း ကျောက်စာကို မြန်မာပြည်ကမ္ဗည်း ကျောက်စာ ဝန်မင်းရုံးတော်က ကူးယူ၍။ ရသမျှ ကြောင်းရေနှင့် အက္ခရာပြန်။ ယခုဝေါဟာရပြန် နှစ်မျိုးကို။ မြန်မာ သက္ကရာဇ်။ ၁၃၀၀ပြည့် နှောင်းတန်ခူး လဆန်း - ၁၁ - ရက်။ အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၉ - ခု။ မတ်လ - ၃၀ -ရက်နေ့စွဲနှင့် နွားထိုးကြီးမြို့ ရွှေကျောင်းဆရာတော် ဦးကလျာဏထန် ပေးပို့သော ကျောက်စာမိတ်တူ။
……………………………………. (အ) တွင်းခြီအ
………….. တရ ………. က်ကျောင်းတောင် ဤလည်
တရပ်လှူ၏ ……….. နောက်ချောင်ငဲပြောင်ခင်ခွဲနှုန် ခင်ပဲခင်နှင့်အကွ၊ ငညိုငဲတောင်ခြီတောင်
ဖက်တမတ်နှိုလှူ၏ လှည်ပျက်ဝဲခွဲနီဤလည်းတရပ်လှူ၏။ သည် (ခ) မြလှူသည်အပေါင်ကို
ပုဆစ်တုတ်သည်ကာအတွင် မင် သိရိသဃငျ်ယာ၊ အတွင် သုမ်စောင်မင်နန်က သူရိယ ကျွန်တောမ အပေါင်နှင်
အကွလှော်ကာသုံစောင်မင်စကြသတေ၊ လှောကာမှူတော်နှင့်အကွ၊ မြောက်ဖ
က်မြင်မှူ တမာခါမင်၊ ပင်သည်မင်၊ လက်ရွေကြီးမင်၊ မြင်မှုတောမျာအပေါင် (မြို့)ရွာမင်
အဘိနန်သူ လှေမင်ရာဇသိင်္ခါ၊ ရဲလှေမှုတောမျာအပေါင်၊ သည်မင်မျာအပေါင်
(ပု)ဆစ်တုတ်၍ မောကွန်တင်၏၊ မောကွန်တင်သောခါ လက်ဆောင်တော်ဆက်
သည် (အပေါင်) ……….. ၊ အိမ်ရှေမင်ကြီကိုဝ်လည်စပါငါရာလက်ဆောင်တော်ဆက်၏ ဖုရရှင်နော
(ရထာ) အတွင်သင်မင်ကြိသိရိဇေယျ နောရဓာ မောကွန်တင်ပေသည်ကို (ပေသ)
……… လှော (ငါ) ကျပ် မောကွန် စာရေကိုဝ်လည် ငွေငါကျပ်စာခွက်စာယောက်အဝ
တ်အစာစုံမ် ပေရ၏၊ မောကွန်ဆောင်ကိုဝ်လည် ငွေငါကျပ်လင်ပန်သန် ေ
တအဝတ် အစာစုံမ် ပေရ၏။ ငါပြုသော ကူနှင်ကျောင်ပျက်သော (ပြုစိမ်) သော
မြေကာ နွာဓိုဝ်(ရွာ) …….. အရှေ့ပြောင်ကြိ (နှင်ခု) နှစ်တင်ဝင်
ဓန်ကိုလည်ကောင် (ပျက်) သော ……. တမောပရန်တိုဝ်ဆောက်ပါ (သော) ဖုရာ …………
…… လျှင်သိဓတ်၊ မိမတယောက်၊ ဖုရာကိုဝ်ပုတ်ဝတ်
(နောက်တောင်ကောင်ရှမ်) ရင်လဲကြီးာလဲငဲာငညိုငဲတောင် ………… ဖျက်သသူကားလူနှစ် ကိုးသန်း
မှတနေ့ဟိသော သိန်းဇိုစ်းငရဲ၊ လူနှစ်သုံမ်းကုဋေ ခြောက်သန်းမှတနေ့ဟိသောကာလသုတ်ငရဲ
…….. ကုဋေ အမြတ်အနှစ် ……. သန်ဟိသော တာပန်ငရဲ လူနှစ် ………… ငရဲ၊ လု …………
န ငရဲ၊ လူနှစ်အကုဋေ ခြောက်ရာသုံမ်ဆဲ အမြတ် အနှစ် …………………………………..
…………. သုံမ်ကုဋေ အနှစ်ခြောက်သန် ……… မှတ ……… ငြယ်၊ (လုနှစ်) သုံမ်ရာခြောက်
ဆဲခြောက်ကုဋေ အမြတ် အနှစ်လေသန်မှ တနေ့ဟိသော ………….. သောငရဲ
………………. ငကောင်မှုကိုဝ်ဖျက် သသူကိုဝ်ကား ဖုရာဓေ ………. မကျွတ်စေသော။
အပြစ်ရှစ်ပါ (တ)န် ဆဲပါ အပဲ လေပါ လာစေသော်(၊) ငကောင်မှု …………. ငါနှင့်အတူရစေ
ပါစေသောဩ ။ ဝ ။ ငမောင် မုံကပေါက်မင်၊ မ …………….. ၊ ဖုရင်မင်
တြာတွင် မောကွန်တင်အံသောခါသော ရိုဝ်ရင်ပေသည် …………… ငါနှင့်အတူ
ရစပါစေသောဩ ။ ဝ ။
(ဤကျောက်စာတွင် ထင်ရှားသော အချက်များတွေ့ရှိပါက ဖြေ့စွက်စေခြင်ပါကြောင်း) ထိုအခါက ဝစ္စပေါက်မသုံးသေး ဦဘချစ် ကျောက်စာရုံးစာရေးကြီး ဤအတိုင်း မန္တလေးမြို့ ကျောက်စာဝန်မင်းကြီး ပြန်ဆိုသောမူအတိုင်း ထည့်လိုက်သည်။
မော်ကွန်းတင်မင်း၏ အမည်နှင့် - ဘုန်းတံခိုး။ မျိုးရိုးဝံသ။
ဘုရားကျောင်း တည်ရာ ဌာနနှင့်။ တည်သော အခြင်းအရာ။
လက်ဆောင်တော် ဆက်သည့် - ပစ်စည်းစာရင်း။
မော်ကွန်းတင်သက္ကရာဇ် - ခု - လ - ရက် - နေ့။
ဘုရားဒါယကာ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်။ မြေပန်ခြင်း။
(၁) ထိုဝတ်ထုကံ - လယ် - ယာ - မိုးမြေ ကျွန်းသီးတော်တို့ကို။ တည်တန့် ခုင်မြဲစေရန်။ ဘုရင်မင်း တြားတွင်။ ကမ္ဗည်း မော်ကွန်း တင်ခြင်းနှင့်။ ပဌမ - မြေလှူစာရင်း။ (၂) မော်ကွန်းတင်သည့် အခြင်းအရာ။
မော်ကွန်းတင်သောခါ၊ လက်ဆောင်တော်ဆက်သသည်ကို ဆိုခြင်းနှင့်။ မော်ကွန်းတင်ပေးသောမင်း။ မော်ကွန်းစာရေး။ မော်ကွန်းဆောင်တို့အား။ အသီးအသီး ပေးရသော အတီး - လက်ခ - စာရင်းကိုဆိုခြင်း။
ဘုရားကျောင်းတို့ ပျက်ပြားသောအခါ၊ ပြုပြင်ရန်မြေနှင့်။ ဘုရားရှင်ကိုယ်စား။ ရုပ်ပွားတော်မြတ်အား။ နိစ္စဘတ်ဆွမ်းသင်ပုတ်ဝတ်ပြုရန် ကျွန်သီး။ သီတင်းသည် မိမ္မတရောက်။ ဆွမ်းသင်ပုတ်အလို့ငှါ။ လယ်မြေလှူသည်ကိုဆိုခြင်း။
ထိုဝတ္ထုကံ ကောင်းမှုတို့အား။ နောင်လာနောက်သားတို့ ဖျက်စီးရန် မဝန့်စေခြင်းငှာ ငရဲကြီးခွန်နှစ်ထပ်တို့၏။ နေ့ရက်ကာလ အသက္ကိုပြ၍ ကျိမ်ဆိုခြင်း။ နိဗ္ဗာန်ဖြင့်ကျိမ်ဆိုခြင်း။ ပစ္စုပ္ပန် အပစ်ဒါဏ်တို့ဖြင့် ကျိမ်ဆိုခြင်း။ တမလွန် ဆင်းရဲဖြင့် ကျိမ်ဆိုခြင်း တည်းဟူသော (သပတ္တာကာရ) ပတ်ထနာကိုဆိုခြင်း။
ပစ္စုပ္ပန် - အနာဂါတ်ကိုငဲ့သော။ ဩဒိဿ ပတ္တိဒါန ပတ္ထနာကိုဆိုခြင်း။
အတိတ် - ပစ္စုပ္ပန်ကိုငဲ့သော။ ဩဒိဿ ပတ္တိဒါန ပတ္ထနာကိုဆိုခြင်း။ ဤသို့အားဖြင့်။ ၇ - ပါးသော ကဏ္ဍတို့ဖြင့်။ ပိုင်းခြား၍ သိအပ်၏။
ထိုခုနစ်ကဏ္ဍတို့မှ လိုရာထုတ်နှုတ်၍။ သရုပ်ကိုဆိုပေအံ့။ နံပါတ်(၇) အတိတ် ပစ္စုပ္ပန်ကို ငဲ့သော။ ဩဒိဿ ပတ္ထဒန ပတ္ထနာကိုဆိုရာ စကားရပ်နှိုက်။ ……………… ငမောင် မုတ်ပေါက်မင်းမ ………….. ဖုရင်မင်တြာတွင် မော်ကွန်းတင်အံ့သောခါ ရိုရင်ပေသည် ……………… ငါနှင့်အတူရပါစေသောဩ။ ဝ ။ ဟူသောစကားရပ်နှိုက် (ငါနှင့်အတူရပါစေသော) ဟု အမျှပေးဝေသောသူသည် (ငမောင်) ဖြစ်၍။ ထို (ငမောင်) သည်ပင်။ ဘုရားဒါယကာဖြစ်ပေသည်။ (ငမောင်) ဟူ၍ - (င) တတ်၍ ငယ်မည်ကိုဆိုသဖြင့်။ ထို ဘုရားဒါယကာကို၊ ဆင်းရဲသား အသည်မျိုး' ဟူ၍ သိအပ်သည်။ ရာဇသင်္ကြံ ငမောက် - တွင်းသင်းမှူး ငနု။ ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ရေးသား သကဲ့သို့တည်း။ ထိုစာ၏အဆုံး၌ (ဩ) ဟူသော အက္ခရာသည်။ ဘုရားဟူ၍ အဓိပ်ပါယ်ရှိသော။ ပေါရာဏယ ဝေါဟာရဖြစ်သောကြောင့်။ မင်းတို့၏ ကောင်းမှုများမှာ ဤစကားကို ထည့်လေ့မရှိ။ (မုတ်ပေါက်မင်) ဟု နာမည်၏နောက်၌။ ဝိသေသနပုဒ်နှင့်တကွ ဆိုသောကြောင့် ထိုဘုရား ဒါယကာသည်။ အညတြ အပါကဏ္ဍမဟုတ်။ မြို့စားရွာစား အသနားခံရသော။ လူရည်ချွန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် ကြောင်းကို သိအပ်ပေသည်။ (မုတ်ပေါက်) ဟူသည်မှာလည်း။ ကျောက်စာ၌ သံချောင်းချစ်ရာ ကူးသောအခါ ပါသွားခြင်း ကြောင့် ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်စာအမှန်မှာ (မုကပေါက်) ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ကျောက်ရေး ဆရာတို့။ သေးသေးတင်။ ဝစ္စပေါက် အောက်မြစ်များကို။ သုံးလေ့မရှိသဖြင့်။ ထိုစာမှာ (မူးကပေါက်) (မူးကံပေါက်) ဤကဲ့သို့ ဖြစ်နှိုင်သည်။ …………… မူး ကားချောင်းမြောင်းရိုးစွပ်ကို ခေါ်သည်။ ထိုအပိုဒ်နောက်က။ အစ၌ (မ) အက္ခရာ တစ်လုံးသာ ကျန်၍ ……… ဖုရင်မင်းတြာ။ ဟူသော ပုဒ်အကြားမှာ။ စာဆယ် ကိုးလုံးပျက်နေသဖြင့်၊ စလင်းသူကြီး မဟာသမန်း။ တောင်နောက်သူကြီး - သမန္တဘဒြာ စသည်တို့ကဲ့သို့။ ထိုဘုရားဒါယကာ၏ - ဂုဏ်ထူးမည်ရည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုပ် - ဘုရင်မင်းတြား၏ နန်းတက်ဘွဲ့တံဆိပ်တော်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ စာရေးပုံကိုထောက်ရှုလျှင် (မုတ်ပေါက်မင်၊) ဟူသော အပိုဒ်မှာ ပုဒ်တားထားပြီးမှ (မ) အက္ခရာ ရှိ၍ (ဖုရင်) ဟူသော ပုဒ်ရှေ့မှာ။ ပုဒ်တားမတွေ့ရသောကြောင့် ဖုရင် မင်းတြား၏ နန်းတက်ဘွဲ့တော် ဟူ၍ မှတ်ယူထိုက်ပေသည် ထိုဘွဲ့ကို ရှာသောအခါ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနှင့် ညီညွတ်၍။ (မဟာသီဟ သူရ) ဟူသော ပြည့်စုံမင်း၏ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်နှင့် အလွန်တိုက်ဆိုင်၍ နေပေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်။ (မဟာသီဟသူရမည်သော) ဖုရင်မင်တြာတွင် ……… ဟု။ ကျောက်စာ ဖြစ်သင့်ပေသည်။ (မူးကံပေါက်)ဟူသည်လည်း။ ကံရွာ၏ ရှေးအမည်ပင်ဖြစ်ရန် ရှိပေသည်။ အကြောင်းကား ………… ယခုရှိသော ဆိတ်လူးကံကြီးကိုပင် (မူးကံပေါက်)ဟု ရှေးမဆွက ခေါ်တွင်ရန် အကြောင်း ရှိပေသည်။ ထိုကံကို မူးကံပေါက်ဟူ၍ မှည့်ခေါ်ဝေါရခြင်း အကြောင်းကား။ မူး၊ ဟူသည်မှာ။ မြစ် - ချောင်းအစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ ရေမပြတ်စီးသည်မဟုတ်ဘဲ၊ ရေလာသည့် အခါ၊ ကမ်းပြည့် ကမ်းလျှမ်လာ၍၊ ပြသည့်အခါ ချောက်သွေ့နေသော - ရိုးစွပ်ရှိ မြှောင် ချောင်းမြောင်း တို့ကို မူးဟုခေါ်သည်။ ထိုမူးသည် ရေလာသောအခါ အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန် လာတတ်သောကြောင့် ………… ရေလျှင် ရူးရူး။ မူးသို့တပ်ကြလဲစနောင်း) ဟူ၍ ရှေးပညာရှိတို့ စပ်ဆိုကြလေသည်။ ယခုရှိသော ဆိပ်လူးကံကြီးလည်း။ ဤကဲ့သို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရေအားသန်သော ရိုးကြီးကို ပိတ်ဆီး၍ ထားသဖြင့် ရှေးအခါကာလ မိုးလေဝသ ကောင်းမွန်လှသည်ဖြစ်၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလို ကျိုးပေါက်ဘန် များသဖြင့်။ ၎ကံကြီးကို (မူးကံပေါက်) ဟူ၍ ခေါ်တွင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာပြောရလျှင်။ နွားထိုးကြီးမြို့ အရှေ့ဘက် - သေနပ်တပေါက်လောက်တွင် ရှိသော - ရိုးတခုကို ပိတ်ဆီး၍ထားသော လယ်ရေသောက် ကံသည်လည်း - ဤကဲ့သို့ပင် ကျိုးပေါက်ဖန်များ သဖြင့် ယခုထက်တိုင်ပင် ကံပေါက်ဟူ၍ ခေါ်တွင်လျှက်ရှိပေသည်။ ထိုမူးကံပေါက်နှင့်နှီးနွယ်၍ မူးကံပေါက်၏ အနီး၌ တည်ရှိသောရွာကိုလည်း မူးကံပေါက်ရွာဟူ၍ ပင်ခေါ်ဝေါ်ကြပေမည်။ ဥပမာ၊ ယခုအောက်ချိုင်းရွာကို၊ သာစည် - ဟုမှည့်ခေါ်သော်လည်း။ အထက်ရွာအမည်နှင့်စပ်၍ ကံရွာဟူ၍ပင် ခေါ်သကဲ့သို့တည်း။ ယခုရှိသော ကံရွာသည် ကုန်းပေါ်မှာ တည်ရှိ၍။ ၎ကို ကံရွာ - ဟုမှည့်နိုင်လောက်အောင် ဤကံမှတပါး။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကံမရှိလေသောကြောင့်။ ထိုရွာသည်သာ၊ မူးကံပေါက်ရွာ - ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ မူးကံပေါက်ရွာသည်။ ကာလတာရှည်သည် တကြောင်း။ ဆိတ်လူးကံဟုအမည်သညာ ပြောင်းလာသည်တကြောင်း။ ဤသို့ စသည်တို့ကြောင့်။ မူးနှင့်ပေါက် ပျောက်၍ ခေါ်ဝေါ်လွယ်ရာကံရွာ ဟူ၍ပင် ယခုထိခေါ်တွင်လာခဲ့ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ အမည်တိမ်ကောသော်လည်း။ သဘောဝတ္ထုကား ယခုမျက်မြင်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုမူးကံပေါက်မှ၊ ဆိတ်လူးကံ ဟု ခေါ်တွင်လာရပြန်သည်မှာလည်း သက္ကရာဇ် -၁၁၈၅ - ခုနှစ်မှ အထက်ကာလ အတော်ကြာကပင်။ ထိုမူးကံပေါက်ကြီး၏ အနီး၌။ ဆိတ်လူးအမည်ရှိသော ရွာတရွာ ရှိခဲ့ပေသည်။ ထိုမူးကံပေါက်ကြီးသည်။ နောက်မှတည်သော ဆိတ်လူးရွာနှင့် အလွန်နီးစပ်နေသောကြောင့်။ ထို ဆိတ်လူးရွာနှင့်နွယ်၍ မူလအမည်ကို ပယ်ပြီးလျှင်။ ဆိတ်လူးကံဟု အများအပြားခေါ်တွင် လာကြသဖြင့်။ မသိသော နောက်လူများက။ အကြောင်းကင်းလျှက်နှင့်ပင်။ ယခုထက်တိုင်အောင်။ အမည်ရင်းဟု မှတ်ထင်ခဲ့ကြသည်။ ဆိတ်လူးဟူသည် - ထိုကံ၏ အမည်ရင်းမဟုပ်။ ရွာ၏အမည်သာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကို - ၁၁၈၅ - ခုနှစ်ရွှေကျောင်းနေ၊ နိသျည်းဆရာတော် ရှင်လင်္ကာသာရ ဘွဲ့ဆိုစီကုန်းခဲ့သော၊ ရှင်ပင်သာထွန်းဦး ဘုရားခေါင်းလောင်းဆုတောင်းစာ၌။ (နွားထိုး၊ တောင်ရုံး၊ သာဆုံးထန်းခွ၊ ထိုမှထန်းဉ် စီလျှင်ဆိတ်လူး တထူးမည်သာ၊ ကံရွာအဆုံး၊ ပေါင်းရုံးခြောက်ရွာ၊ ဒါယကာတို့)ဟု ဖွဲ့ဆိုလျှက်ရှိသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ …… နွားထိုး၊ ရုံးကုန်း၊ ထန်းခွ၊ ထန်းစဉ်၊ ဆိတ်လူး၊ ကံရွာ ၎ခြောက်ရွာသားတို့ ခေါင်းလောင်းသွင်းလှူပူဇော်ကြောင်းကို ပြဆိုပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိတ်လူးသည် ထိုကံ၏ အမည်ရင်းမဟုပ်။ မူးကံပေါက်သည်သာလျှင် အမည်ရင်း ဖြစ်၍။ ယ်ခုကုန်းထက်၌ရှိသော ကံရွာသည်ကား မူးကံပေါက်ရွာ ဖြစ်ကြောင်းကို။ ဤမော်ကွန်းဖြင့်ပင် သိသာထင်ရှားပေသည်။ (မော်ကွန်းတင်အံ့သောခါသော) ဟူသော စာပိုဒ်နောက်၌ (ရိုရင်ပေသည်)ဟူသည်။ ရောင်းရင်း ဟူသော စကားနှင့် အတူတူဖြစ်၍။ ရင်းနှီးခြင်း။ အတူတကွ နေထိုင်ပေါင်းဘက်ခြင်း။ ငယ်ပေါင်း ကြီးဘော် - ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသဖြင့်။ အတိတ် - ပစ္စုပ္ပန်ကို ငဲ့သောကြောင့်။ ရှေးကအတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ဘူးသော။ ဆွေရင်းမျိုးချာ။ ယခု မော်ကွန်းတင်ရာတွင်။ အတူတကွရှိကြကုန်သော။ မင်းပရိသတ် အစရှိသော သူတို့ကိုပြသည်။ ထိုစာပိုဒ်နောက်၊ စာလေးလုံး ငါးလုံးလောက် ပျက်ပြီးမှ (ငါနှင့်အတူ) ဟူသော စကားကို တွေ့ရသဖြင့် ကျောက်စာ၏ သဘောမှာ (ရိုရင်ပေသည် သူခပ်သိမ်းအားလည်း)ဟူ၍ ဖြစ်သင့်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ - နံပါတ်(၇) သတ္တမကဏ္ဍစကားရပ်ကို အပြည့်အစုံဆိုပါမူ။ (ငမောင်မူးကံပေါက်မင်း။ မဟာသီဟသူရ အမည်တော်ရှိသော ဖုရင်မင်တြာတွင် မော်ကွန်းတင်အံ့သောအခါသော် ရိုးရင်းပေသည့် သူခပ်သိမ်းအားလည်း ငါနှင့်အတူ ရပါစေသော ဩ။ ဝ ။ ဟူ၍ ဖြစ်သင့်ပေသည်။ အဓိပ်ပါယ်မှာ။ ငမောင် မူးကံပေါက်မင်း မော်ကွန်းတင်သောအခါနှိုက် အတူတကွ ပုဆစ်တုတ် ကြသော မင်းများအားလုံးသည် ငါနှင့်အတူတကွရပါစေသောဟု၊ အထူးအမျှပေးဝေခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်ပင်သာဒွန်းဦးဘုရားမော်ကွန်းကျောက်စာ&oldid=291352" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆၊ ၁၂:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။